चीन भन्छ -भारतले अमेरिकासँग गहिरो सम्बन्ध बनाउन खोज्नु आगोसँग खेल्नु बराबर::Best Online News Portal of Nepal
चीन भन्छ -भारतले अमेरिकासँग गहिरो सम्बन्ध बनाउन खोज्नु आगोसँग खेल्नु बराबर
एजेन्सी। अमेरिकी विदेश सचिव माइक पोम्पीओले शुक्रबार भारतसँग घनिष्ठ सम्बन्धको लागि आग्रह गरे। किनकी, चीनसँगको युद्धमा अमेरिकाका लागि भारत सहयोगी र साझेदार बन्न आवश्यक छ।
चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स लेख्छ – ‘अमेरिकाले भारत-प्रशान्त रणनीतिलाई अगाडि बढाएदेखि भारत वासिङ्टनको समर्थन लिन चाहन्छ । भारतले ठूलो शक्ति भएको कुराको फाइदा उठाउँदै अमेरिकाले नयाँ दिल्लीलाई खाली खालका प्रतिज्ञाहरू गरेको छ र बीचमा भएको सीमा द्वन्द्वको प्रयोग गरेको छ।’
अमेरिकाले भारतसँग गठबन्धनको गठन गर्न चाहेको छ । पोम्पीओले मंगलबार टोकियोमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग भेट गरे र उनी छिट्टै नयाँ दिल्लीको यात्रा गर्नेछन्। अक्टुबर २६ देखी २७ भारतीय समकक्षीहरूसँग वार्ताका लागि। यी दुई देश बीचको उच्चस्तरीय बैठकहरू वास्तवमा वाशिंगटनको उत्सुकताको झलक हो।
यस्तो व्यवस्थाले वास्तवमा भारतलाई ठूलो महत्त्वको देश भएको महसुस गराउन सक्छ। तर, नयाँ दिल्ली हिचकिचाउँदो छ, किनकि मोदी सरकारलाई थाहा छ कि अमेरिकाले मुख्य रूपले चीनको सामना गर्न मोवाहाको रूपमा हेरेको छ। यदि भारतले वास्तवमा अमेरिकाको साथ गठबन्धन बनायो र अमेरिकाको अनुसरण गर्‍यो भने, नयाँ दिल्लीको स्वायत्तता प्रभावित हुन बाध्य हुनेछ, त्यसबेला भारत नराम्रो अवस्थामा पस्नु अचम्मको कुरा होइन।
दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू बीचको द्वन्द्वमा सामेल हुनु राम्रो मानिदैन । बरु, यसले केवल समय र स्रोतहरू खान्छ, नयाँ दिल्लीलाई यसको प्रमुख शक्ति सपनाबाट टाढा बनाउँदछ।
पोम्पीओले लगातार भारतको चीनको विकासको कथित खतरालाई जोड दिँदै आएका छन् र भारतलाई चीनको सामना गर्न उत्साहित बनाएका छन् ।
सीमा विवादको सवालमा कडा कदम चाल्नु भारत सरकारको राजनीतिक आवश्यकता हो। तर, अझ जरुरी रूपमा, नयाँ दिल्लीले तीव्र आर्थिक बृद्धिलाई फलो गर्न सक्नुपर्दछ। विश्वव्यापी औद्योगिक चेनहरूको सन्दर्भमा चीनको विकल्प बन्न सक्छ भारत । तर, वासिङ्टनले नयाँ प्रतिस्पर्धी र चुनौती दिने सम्भावित ठूलो देशलाई वास्तवमै सहयोग गर्दैन।
चीन र भारतबीचको समस्या क्षेत्रीय हो। बिश्लेशकका अनुसार तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न, दुई देशहरूले आधा बाटोमा शान्तपूर्वक एक अर्कालाई भेट्नु पर्छ। बाहिरी कुनै द्वेषपूर्ण हस्तक्षेपले परिस्थितिलाई अझ जटिल बनाउँदछ।
हालका वर्षहरूमा अन्तरक्रियामा अमेरिका र भारतले एक अर्कालाई आफ्नै लागि प्रयोग गरिरहेका छन। यद्यपि हालको अमेरिकासँग गहिरो सम्बन्ध विकास गर्नु भनेको नयाँ दिल्लीका लागि आगोसँग खेल्नु बराबर हो ।
सीमा वार्तामा भारतले ताइवानको प्रश्न उठायो भने चीनद्वारा कारबाही गर्ने चेतावनी
चीनविरुद्ध लड्न भारतीय सेनाको गुप्तचर बने तिब्बती शरणार्थीहरू
चिनियाँ सेनालाई युद्धको तयारी गर्न राष्ट्रपतिले किन आदेश दिए ?
चिनियाँ राष्ट्रपतिले भारतबिरूद्ध किन सार्वजनिक रुपमा प्रतिक्रिया दिँदैनन् ?
भारतसँग तनाब बढिरहेको बेला चीनले निर्माण गर्‍यो अत्याधुनिक सैन्य ड्रोन
चीनलाई जवाफ दिन भन्दै भारतले सीमामा तैनाथ गर्‍यो सबैभन्दा खतरनाक मिसाइल
भारतीय सेनाद्वारा चिनियाँ सेनालाई लखेटेर सीमामा ६ वटा पहाड कब्जा गरेको दाबी
चीनले भारतका उच्च अधिकारीको गोप्य बिबरण ह्याक गरेको दाबी, चीनद्वारा अस्वीकार
चीनले भारतलाई चेतावनी दिँदै भन्यो, ‘शान्तिसँगै युद्धका लागि पनि तयार छौ’
युद्धका लागि चीनले पटक-पटक सैनिक शक्ति देखाएको भारतको आरोप
भाेलिबाट पाँच दिन ‘काेभिड-१९ प्रेस ब्रिफिङ’ नहुने
अबको दुई महिनाभित्र कोरोनाकाे खोप आउँछ : डाक्टर कोलिन्स
विज्ञापनरहित विदेशी च्यानल प्रसारण गर्न सरकारको आग्रह
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए १ हजार ५५२ कोरोना संक्रमित